SimplyCast: Platform Nkwukọrịta Ndị Ahịa | Martech Zone
The SimplyCast 360 Onye njikwa akpaaka jikọtara ntinye ọwa 15 n'ime otu ikpo okwu, na-enyere ndị marekters aka iwulite mkpọsa ahịa akpaka na nkwukọrịta. Ihe ngwọta ha na-enye gị ohere iru ndị ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị site na usoro nkwukọrịta kachasị amasị ha. Soro ndị ahịa na atụmanya dabere na data echekwara, ọdịmma ha, na mmekọrịta ha na nzukọ gị n'oge gara aga iji mee ka nloghachi gị na itinye ego.
The Naanị ahia akpaaka ngwọta na-enye gị ohere ịtọlite ​​mkpọsa gị dị ka eserese na-asọ asọ, na-enye gị ohere iru ma soro ndị na-atụ anya gị na ndị ahịa gị site na ọtụtụ ọwa:
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa - Mara nke oma onye ndu gi na-ekpo oku bu ma otu esi eme ka ha choo.
email Marketing - Mepụta, zipu ma soro mgbasa ozi ịre ahịa email.
Njikwa ndepụta - Mepụta, chekwaa & mepụta ndepụta kọntaktị gị na ikike nchekwa na-akparaghị ókè.
ụdị Nrụpụta - Mepụta ụdị ntanetị n'ịntanetị na ngwaahịa kachasị mfe na ahịa. Enweghị ihe ọmụma HTML chọrọ.
Ibe akwukwo - quickzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji mepụta ọtụtụ peeji ọdịda iji soro ihe peeji kachasị arụ ọrụ.
Nnyocha ntanetị - Mepụta ma zipu nyocha ntanetị nke na-adọta nzaghachi onye ọrụ na nkeji.
Njikọ Ndepụta - Soro mfe pịa -pịrị na ọnụego emeghe iji nyere aka chọpụta ihe ahịa kacha arụ ọrụ.
Onye na -aza ajụjụ - Mee mmekọrịta chiri anya na ozugbo site na iji usoro ịgbaso usoro akpaghị aka ha.
Blacklist Nyochaa - Emela ohere na akụrụngwa ahịa gị na aha ọma gị. Bido nyochaa IP gị taa.
Faksị Ahịa - Ziga faksị blasts na ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na-enweghị nsogbu. Ezigbo maka ezubere iche maka azụmaahịa mpaghara.
omume Management - omume mkpọsa na ngwaọrụ jirichaa abịa.
Olu Mgbasa Ozi - Na-akpaghị aka na-agbasa ozi ederede ederede iji kọwaa ma chetara ndị ahịa gị.
Ederede ederede - jikọọ na ndị ahịa gị site n’itinye ozi gị n’aka ha.
Ahịa na-elekọta mmadụ - tinye na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kachasị ewu ewu taa, gụnyere Facebook na Twitter.
Tags: akpaakablacklist nyochaaemail Marketingnjikwa ihe omumeFacebookfaxfaksị marektingụdị onye na-ewu ụlọmbido peeji nkenjikwa ndepụtanyocha onlinenkewaahịa mmadụederede ederedeTwittermgbasa ozi olu
The A na Z Nduzi maka Mgbasa Onwe Onye